သနပ်ခါးမေ: October Avon promotion သတင်းကောင်း
Hi Sis, I like those Avon products and would like to buy. But seems like this online sales is only for US and I can't register from here, SG. Do you have any alternative idea how to register for the account or have you ever buy before? anyway thanks for your information.
credit card မရှိလို့
ကောက်ရတော့ ပြန်ပေးမှာပေါ့ :P
ညလေးက လိမ္မာပါတယ်နော်း))
မြတ်ကြည် October 18, 2011 at 3:43 AM
Hello, i have asked the avon representative for the solution in order to purchase the product from Singapore. She will reply under this post. :) thanks for reading my blog.
မြတ်ကြည် October 18, 2011 at 3:46 AM
မိစံ၊ မြတ်ကြည်ရန်ကုန်ပြန်ရင် လက်ဆောင်ဝယ်ခဲ့မယ်နော်။ မျက်ခုံးမွေးဆွဲတံ တစ်ချောင်း :P
Thanks in advance, Sis... :)
မြသွေးနီ October 19, 2011 at 2:10 AM
သြော်... မိတ်ကပ်ဘူးတစ်ဘူးဆို မေ့လောက်မှ သုံးဖြစ်တဲ့ သူဆိုတော့ ဒီလိုပွဲတွေက မြသွေးနီတို့လို လူတွေသာများများရှိရင် ထိုင်ငိုလောက်တယ်။ :)
မြတ်ကြည် October 20, 2011 at 5:00 PM
Sis, i am so sorry that, there has been no reply from the representative. I will buy for you and send you to the address, if you would like to :)
ညီမလေးရေ...အမကို အခုလို တကူ.တက မေးပေးတာကိုပဲ ကျေးဇူးတင်လှပါပြီ။ တခါတလေ sales representative တွေက ဒီလိုပါပဲ။ အမက Avon products တွေကို ကြိုက်တယ်။ အရင် အမ မိဘတွေ Malaysiaမှာ နေတုန်းကဆို အမေက ၀ယ်ဝယ်ပို.တယ်။ SG မှာတော့ မတွေ.မိဘူး။ နောက် ဈေးတွေကလည်း တော်တော်သက်သာနေလို. လွယ်လွယ်ကူကူဝယ်လို.ရမယ်ဆို အမက ၀ယ်ချင်မိတာပါ။ ညီမလေးဝယ်ပေးမယ်လို. Offer လုပ်ပေးတာကိုတောင် တကယ် appreciate ဖြစ်မိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ညီမရေ.. နိုင်ငံခြားမှာ လူတိုင်းက ကိုယ့်ဟာကိုယ်တောင် အားနိုင်တာမဟုတ်ကြဘူး။ ညီမလေးကို အလုပ်ပိုအောင် အမ မလုပ်တော့ပါဘူး။ အချိန်အားလေးတွေရရင်သာ ခုလို အလှအပဆိုင်ရာ article လေးတွေရေးပေးပါနော်... အမက ညီမလေးရဲ. စာဖတ်ပရိတ်သပ်ပါ။
မြတ်ကြည် October 21, 2011 at 4:41 PM
အစ်မရေ၊ အခုလို ညီမဘလော့လေးကို ပုံမှန်စာဖတ်တဲ့ သူရှိလို့ အရမ်းဝမ်းသာမိပါတယ်။ နောက်အချိန်ရရင် ရသလို ပို့စ်လေးတွေ တင်ပေးပါဦးမယ်နော်။ :) Thank you Ama